Filimka Phillauri Oo Ganacsi Hooseeyo Sameeyay Sedexdiisa Maalmood Ee Ugu Horeyso - Hablaha Media Network
Filimka Phillauri Oo Ganacsi Hooseeyo Sameeyay Sedexdiisa Maalmood Ee Ugu Horeyso
HMN:- Anushka Sharma iyo Diljit Dosanjh filimkooda Phillauri ayaa ganacsi hooseeyo sameeyay sedexdiisa maalmood ee ugu horeyso (First Weekend).
Sida shabakada Boxoffice India soo daabacday filimka Phillauri wuxuu keenay 14 Crore (Trade Figure) sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay waxaana lacagihiisa hoos u dhigay in maalintii Axada filimkaan ganacsi xoogan sameynin asigoo keenay lacago u dhaxeyso 5.25 Crore ilaa 5.50 Crore.
Kaliya 10% ilaa 15% sare u kac ayuu sameeyay filimka Phillauri maalintii Axada ahayd waxaana laga rabay ka badan madaama ay ahayd maalin shaqada laga nasanaayay sidoo kalena qoysaska ay firaaqo weyn u heesteen inay filimkaan usoo daawasho tagaan balse midaas ma dhicin.
Waqooyiga Hindiya filimka Phillauri maalinta kowaad ayuu ganacsi xoogan ka sameeyay waxaana ugu wacnaa in Super Star-ka reer Punjab Diljit Dosanjh ku jiro, balse labadii maalmood ee dambe hoos u dhac ayuu ganacsiga halkaas ka sameeyay waxaana ugu wacan in Diljit Dosanjh filimkaan hogaamiye dhameestiran ka ahayna ka xumaadeen reer Punjab.
Filimka Phillauri ganacsi waali ah ayuu ka sameyn lahaa Waqooyiga Hindiya oo dhan hadii filimkaan Diljit Dosanjh hogaamiye buuxo laga dhigi lahaa laakiin midaas ma dhicin.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Phillauri sedexda maalmood ee ugu horeesay lacagaha uu keenay: